Iimpawu zesixeko sanamhlanje kwinkulungwane yama-XNUMX | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Adriana | | Umoya ovuselelekayo, Yendalo
Las zixeko Ziziza ezenza utshintsho ngokweenkqubo ezahlukeneyo ezenzeka kuzo, indlela yoluntu oluhlelwe ngayo kunye nexesha.
¿Injani idolophu yanamhlanje? Zeziphi iimfuno ekufuneka zibenazo ukwanelisa iimfuno zabasebenzisi kwaye zibe nobuhlobo kwindalo esingqongileyo? Masiyibone ngokulandelayo:
Iimpawu zesixeko sanamhlanje kwinkulungwane yama-XNUMX
Namhlanje kukho utyekelo oluthile lokuphucula izixeko, kodwa ukufezekisa le njongo, kufuneka kuthathelwe ingqalelo izinto ezithile ezisisiseko ezahlula isixeko. isixeko sanamhlanje zabanye ababuyela umva njenge:
Ukuphonononga kwaye ukuba kukho imfuneko yokutshintsha indlela yokulungelelanisa kunye nokusetyenziswa kommandla wezixeko.
Yandisa iinkonzo zoluntu kulo lonke uluntu njengamanzi okusela, inkonzo yogutyulo, umbane, intanethi, igesi, phakathi kwabanye.
Nyusa i izakhiwo zendalo yezakhiwo ezitsha okanye amakhaya kunye nohlengahlengiso okanye ukubuyisela ezindala ukubenza bazinze ngakumbi.
Imatriki yamandla kufuneka icwangciswe ngokusekwe amandla ahlaziyekayo kwaye yahlukile. Ukongeza ekukhuthazeni ukusetyenziswa kwe amandla acocekileyo zombini ngohlobo lwasekhaya kodwa kwanokusetyenziswa kwemizi-mveliso.
Ukugcinwa kwezithuba eziluhlaza kufuneka kukhuthazwe kwaye kwandiswe ukwandiswa ukuba kunqabile.
Tyala imali kwaye uphuhlise izicwangciso ukuhamba okuzinzileyo ezixekweni kunye nokukhuthaza nokuphucula izithuthi zikawonke-wonke, iibhayisekile kunye nezinye iindlela zendalo.
Ukubeka phambili ukusetyenziswa kwetekhnoloji eluhlaza kunye namandla.
Ukukhuthaza ukonga umbane kunye nokusetyenziswa ngendlela eyiyo kwamandla kuzo zonke iindawo zeedolophu.
Fundisa ngemicimbi yendalo esingqongileyo nakwimfundo esesikweni nengacwangciswanga ngendlela yokunyamekela okusingqongileyo kunye neendlela zokusebenzisa ekufuneka ziguqulwe.
Ukuphuhlisa iinkqubo eziqhubekayo ze kwakhona kuzo zonke iintlobo zezixhobo.
Yenza amanyathelo kunye nemigaqo-nkqubo ecutha ukungalingani kwintlupheko.
Le yeyona micimbi iphambili ekufuneka ithathelwe ingqalelo ukufikelela kwi isixeko sanamhlanje senkulungwane yama-XNUMX.
Zininzi izixeko ezizama ukuyiphumeza, kodwa ezinye zisekude kakhulu, ezifuna isigqibo esikhulu kwezopolitiko kunye noxinzelelo kubemi ukuba baziphumeze.
Kunzima kakhulu Guqula i-nucleus yedolophu ibe sisixeko sanamhlanje neemeko ezifanelekileyo zokuhlala kwabantu ezikhusela okusingqongileyo kunye nokugcina izibonelelo zayo ukulungiselela izizukulwana ezizayo.
Ngaba ungongeza amanye amanqaku kuluhlu lweempawu ekufuneka isixeko sanamhlanje sibe nazo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Isixeko sanamhlanje